galmudugnews.com » Cabdi Shukri oo ka hadlaya Xalaada Galmudug iyo Xukumadda cusub
Home » WARARKA » Cabdi Shukri oo ka hadlaya Xalaada Galmudug iyo Xukumadda cusub Cabdi Shukri oo ka hadlaya Xalaada Galmudug iyo Xukumadda cusub admin on
Nov 8th, 2012 //
No Comment Views 165180C/shukri Cali Xirsi oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliya ayaa ka hadlay xaalada Somaliya Xukuumada Cusub ee la dhisay iyo xaalada Galmudug
C/shukri ayaa ugu baaqay Baarlamaanka Soomaliyeed in ay ansixiyaan Xukuumada Cusub, waxa uuna sheegay in Xukuumada Cusub ay tahay mid tayo leh.
“ ma ahan in Xukuumada la dhaliilo waa Xukuumad tayo leh oo kooban, Marka waxaan oran karaa Xukuumadan wax badan ayay qaban kartaa, Waa in aan uwada tanasulna Dawladaan cusub lana shaqeyna sidii aan dalkeena Hooyo dib udhisan lahayn oo sharafteeni iyo karaamadeeni u soo ceshan lahayn, anaga oo dhan ma wada noqon karno Madaxweynayaal iyo Wasiiro”ayuu yiri C/shakuri Cali Xirsi.
“ Maamul Goboleedyada ha ogaadaan in Xukuumada dhexe ay tahay awooda ugu sareysa Qaranka oo ay iyadu wakiil ka tahay maamul goboleedyada ka dhisan Soomaliya, Maamul Goboleedyada awood uma lahan in ay xariir la sameeyaan wadamada caalamka, mana yeelan karaan Wasiiro caalamka la xaajooda. Sida Dawladaha Federalka e Jarmalka, Najeeriya iyo Itoobiya Dawlada dhexe ayaa canshuuraadka, Ayraboorada, Dekedaha, Amniga, Xiriirka Calamka, Sugidda xuduudada, hawada iyo xeebaha Qaranka kuli waxa masuliyadeeda iyo maamulkeeda iska leh Dawlada dhexe ee Federaalka. marka macnaha Federaalka ma ahan in Maamul Goboleed kasta uu udhaqmo sida Dawlad dhexe, sidaas daraadeed waxaa meesha ka maqan in seminaro aqoon kororsi ah oo dinaca midaamka Federalka loo qabto Maamul Goboleedyada Soomaliya kuwa dhisan iyo kuwa dhismi doona ”ayuu markale yiri C/shukri Cali xirsi.
“ Dadka dagan Galmudug waa in ay ku Noolaadaan Nabad oo ay qilaafkooda ku xaliyaan wada hadal, Galmudug ma ahan hal jufo sida aan hadda u aragno, waa in la isugu yeera dhamaan beeleha degan Gobolada Mudug, Galgaduud iyo Hiiraan oo ay udhistaan maamul balaaran oo wax tar leh”ayuu markale Yiri C/shukri cali Xirsi.
Hadda Galmudug Ilaa labo shaqsi ayaa Madaxweyne sheeganeysa oo labadaba si sharci daro ah iskood isku magacaabay iyada oo Madaxweyne Maxamed Axmed Caalin oo si rasmiga ah weli taagan yahay, waxaas wax caqliga saliimka qaadan karo ma ahan.
Sidoo kale siyaasigan ayaa sheegay in Dowlada Cusub laga sugayo waxyaabo badan oo aysan qaban Dowladii ka horeysay.
Popular post by viewDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 21016 hitsContact US - 19652 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 15764 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 15315 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 13948 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 13893 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 13821 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 13536 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo - 11795 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 11789 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 11737 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11528 hitsTopnews:- Heshiiskii Kampala oo fashil qarka u saaran iyo Iscasilaadii Farmaajo !! - 11507 hitsDhageyso Sarkaal Mareexana oo Hawiye si xun u caayay - Bashiir Jeneral Dhiin - 11360 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11208 hitsWariye qiimeen ku sameeyay sababaha Al-Shabaab uga baxeen Muqdisho - 11170 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 11062 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 11051 hitsDilaagii Khaarijiyay Agaasimihii Waagacusub oo Muqdisho lagu dilay - Walaalkii oo seexan La? - 10805 hitsDaawo Wareysigii ugu xiisaha badnaa taariikhda oo Faysal Cali Waraabe lala yeeshay - 10387 hitsWarar yahanka kooxda Realmadrid Cristiano Ronaldo oo jebiyay rikoorka gool dhalinta Horyaalka Spain - 10357 hitsKhaliif weyne oo Qaar ka mida beelaha Sacad caayay- Yaab - 10304 hitsXaaskii Adan Xaashi Ceyrow oo joogta Pakistan. - 10022 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 9990 hitsDaawo xiisadii ka dhalatay heshiiskii Ankara oo cirka isku shareertay -Wasiirkii Khaarijiga TFG oo cambaareeyay - 9786 hits Home About